Featured – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
—–၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. မျက်မြှေးကိုကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်မှာ ဘယ်လိုရောဂါတွေကို သိနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ A. လူတစ်ယောက် သွေးအားနည်းရောဂါ ရှိ၊ မရှိဆိုတာ သိဖို့ဆိုရင် မျက်မြှေး(Conjunctiva)ကို လှန်ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ သွေးအားနည်းနေရင် သွေးကြောတွေမှာ သွေးစီးဆင်းမှုက...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေ ကိုတာက ညည်းတွားတယ်။ “ အခုတလော ကျွန်တော်မေ့တတ်နေတယ်ဗျာ” ဘာလို့မေ့တတ်တာလဲ “ လူကိုသိပေမယ့် သူ့နာမည်ကို အစဖော်လို့မရတာမျိုးပါ။ ဥပမာဗျာ-ကျွန်တော်သိဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ယောက် ဆိုပါတော့။ သူဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ...
—၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊— Q. ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် သိချင်လို့ပါ။ မိန်းကလေးခြေထောက်တွေ၊ ဖိနပ်တွေကို စွဲလန်းတာက စိတ်ရောဂါလို့ ပြောလို့ရပါသလား။ google မှာရှာကြည့်တာကျတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိတ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့လို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပျောက်နိုင်မလဲ။ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူတွေရော...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– (အမှာစာ – အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာပါရဂူ ပါမောက္ခဒေါက်တာ Meir Kryger ရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့ ” The Mystery of The Sleep” စာအုပ်ကို စာရေးသူရရှိပါတယ်။...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— အရပ်ခေါ် “ ရေဖျင်း” ကို ဆေးစာနဲ့ Portal hypertension လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သွေးတိုးကိုခေါ်တဲ့ (ဟိုက်ပါတင်းရှင်း)ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဖိအားများနေတာ နောက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (ပိုတယ်လ်)ဆိုတာက Portal venous system...